Voapetraka Ho Vakoka ny Taombaovao Bengali Manandratra ny Demaokrasia sy ny Fahasamihafana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2017 4:54 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Ελληνικά, Español, Italiano, বাংলা
Mangal Shobhajatra, diabe maroloko natomboka tao amin'ny Sampan'ny Kanto Voakaly Fatratra ao amin'ny Oniversiten'i Dhaka tamin'ny marainan'ny Pahela Baishakh, taombaovao Bengali. Sary tao amin'ny Flickr avy amin'i Aaapon. CC BY-NC 2.0
Nankatoavin'ny UNESCO ho Vakoka tsy manam-batana ny Mangal Shobhajatra, diabem-bahoaka maroloko karakarain'ny mpianatra sy mpampianatra ao amin'ny Fakiolten'ny Kanto Voakaly Fatratra ao amin'ny Oniversiten'i Dhaka ao Bangladesh ho fankalazàna ny taombaovao Bengali .
Isan-taona amin'ny marainan'ny Pohela Baishakh, andro voalohany amin'ny alimanaka Bengali (14 na 15 Aprily), an'arivony ny olona avy amin'ny saranga rehetra tonga mamonjy ny famoriam-bahoaka, izay manomboka eo anoloan'ny Sampana Zava-kanto Vakaly Fatratra ao amin'ny fihaonan-dalana Shahbag ao an-drenivohitr'i Bangladesh, Dhaka. Manao fitafiana nentim-paharazana sy saron-tava miloko isan-karazany ny mpanao fihetsiketsehana no sady milanja sora-baventy maneho ny fiainana ambanivohitra sy ny raharaha andavanandron'ny olona Bengali.
Hoy ny UNESCO:
Ny fetibe Mangal Shobhajatra dia manamarika ny rehareha ananan'ny olona ao Bangladesh amin'ny lova miavaka azy ireo, sy ny tanjaka mbamin'ny herim-pon'izy ireo hiady amin'ny herin'ny ratsy, sy ny hetahetan'izy ireo hitandro ny fahamarinana sy ny rariny. Maneho firaisankina sy ny soatoaviana ifampizarana hiarovana ny demaokrasia, mampiray ny olona tsy ijerena saranga, finoana, fivavahana, ny maha-lahy na vavy na ny taona ihany koa izany. Ifampitan'ny mpianatra sy ny mpampianatra ao anatin'ny fiarahamonina ny fahalalana sy ny fahaiza-manao.
Nandritra ny taona maro, nijoro ho fanambaràna feno fahasahiana iadiana amin'ny fanatisma ara-piarahamonina sy ara-pivavahana ao amin'ny firenena maro an'isa Miozolomana ny diabe Mangal Shobhajatra, izay toherina sy rahonan’ ny hiringiriny ara-pivavahana ny lanonana Mangal Shobhajatra.
Nanambara izao fanomezam-boninahitra izao ny UNESCO tamin'ny 30 Novambra 2016, taorian'ny fivoriana tao Addis Ababa, Ethiopia.
Voasoratra ao amin'ny Lisitra Mahasolontena ny Vakoka Tsy voatsapan-tanana.
Nientanentana tamin'ity fankatoavana ity ny Bangadeshita Misir Ali raha nanoratra tao amin'ny Facebook:
Tsy fandresen'ny firenena ihany, fa fandresen'ny kolontsaina Bengali ihany koa. Ary mametraka fandraisana andraikitra fanampiny ho antsika izany mba ho azo antoka fa mijanona ho maro loko sy ho mahafaly mandrakizay ny fankalazana ny Taombaovao, satria hetsika manerana izao tontolo izao izany.
Anisan'ny vakoky ny UNESCO ankehitriny ilay Mongol Shobhajatra antsika, Faly, Mirehareha, Fomban-drazana, Bangladesh
Fotoana fohy taorian'ny fanambarana, nanazava tao amin'ny Facebook ny minisi-panjakana misahana ny raharaham-bahiny, Atoa. Md. Shahriar Alam, fa vokatry ny asa lehibe teo amin'izy ireo ny filazana :
Niasa momba azy ity nandritra ny fotoana ela izahay ary ankehitriny nekena ny fanambarana taorian'ny adihevitra naharitra roa ora. Arahabaina ny rehetra.
Olona mankalaza ny Pahela Baishakh nandritra ny Mangal Shobhajatra (Diabe), Sary avy amin'i Sourav Lasker. Copyright Demotix (14/4/2015)
“Azon'ny fialamboly sy ny hafaliana roahina ny tahotra apetraky ny didy jadona”
Na dia efa nisy hatramin'ny taonjato vitsivitsy aza ny fankalazana ny Taombaovao Bengali, dia somary vao haingana kosa ny Mangal Shobhajatra. Nanomboka tamin'ny taona 1989 ny famoriam-bahoaka nataon'ny mpianatra tao amin'ny Oniversiten'i Dhaka, izay tratran'ny lonilony tamin'ny fitondrana jadona miaramila nitondra ny firenena tamin'izany fotoana izany. Ny taona nanaraka, niteraka fihetsiketsehana goavana manerana an'i Dhaka ny fahadisoam-panantenana tahaka izany, fihetsiketsehana izay niafara tamin'ny firodanan'ny didy jadona sy nitondra nankany amin'ny demaokrasia parlemantera ao Bangladesh.
Iray tamin'ireo mpikarakara ny andro voalohany tamin'ny Mangal Shovajatra i Najib Tareq, mpanakanto. Tsaroany fa iray amin'ireo tanora kely taona indrindra mpilatsaka an-tsitrapo izy tamin'izany fotoana izany:
Nanomboka tamin'ny andro voalohany amin'ny Taombaovao Bengali ny famoriam-bahoaka mahafinaritra. Fantatray fa afaka mandroaka ny tahotra apetraky ny didy jadona ny fialamboly sy ny hafaliana. Te hanafoana ny hafaliana eo amin'ny vahoaka sy hametraka tahotra rehefa didy jadona. Noho izany, ny hafaliana no nataonay ho fitaovam-piadiana voalohany sy lohalaharana hiadiana amin'ny jadona.
Notsiahivin'i Rafiqun Nabi, sady artista no mpampianatra ao amin'ny Ivontoeran'ny HaiKanto ao amin'ny Oniversiten'i Dhaka tamin'ny antsafa ihany koa ny fanoherana natrehin'ny famoriam-bahoaka:
Niatrika zava-tsarotra goavana izahay tamin'ny fanaovana ny fety Mangal Shovajatra ho fetim-bahoaka. Nampitahorin'ny fitondrana jadona izahay ary norahonan'ny hiringiriny ara-pivavahana.
Manan-karena lova efa ho 2.000 taona i Bangladesh amin'ny fampiantranoana olona avy amin'ny fivavahana, saranga, sy finoana maro samy hafa. Ankehitriny, Miozolomana 90% i Bangladesh. Mihevitra ny maro amin'ireo mpandala ny nentiin-drazana fa tsy islamika ny Mangal Shovajatra ary manohitra ny soatoavina ara-pivavahana.
Nitaky ny hanafoanana ny Mangal Shovajatra ilay mpitarika Silamo mpandala ny nentin-drazana, Maulana Ahmed Shafi:
Araka ny finoana silamo, mitranga daholo araka ny sitrapon’ i Allah ny tsara sy ny ratsy, ny tsara fanahy sy ny manala baraka . Noho izany, tokony hivavaka amin'i Allah irery ihany ny Silamo raha hirary soa ao amin'ny fiarahamonina. Ka tokony hialan'ny Silamo ny ny kolontsaina Mangal Shovajatra.
Misy ihany koa ny miantso ny fety ho toy ny ao anatin'ny fankalazan'ny fivavahana Haindò, ary noho izany,mihevitra izy ireo fa tokony hiala amin'izy ireo ny Miozolomana.
Na izany aza, nanohitra ny lahatenin'ireo mpandala ny nentin-drazana ara-pivavahana tao amin'ny Facebook i Gazi Joyeeta Mahid:
Ny ranomasina marolokon'ny mpifety Taombaovao
Nanatontosa lahatsary fanadihadiana momba ny Mangal Shovajatra ilay mpanao gazety, Shimul Bashar. Nizara izany tao amin'ny YouTube izy rehefa nandre ny fanambarana ny vakoka ara-kolontsaina:
Ity sary sasany momba ny Mangal Shovajatra tao amin'ny Instagram.
Namboarin'ny mpianatra tao amin'ny Sampana Zava-kanto ao amin'ny Oniversiten'i Dhaka ny saron-tava. Nanampy azy ireo nanamboatra ihany koa ny hafa.
Tsy ny sarontava ihany, fa na ny sora-baventy maroloko sy ny zava-kanto aza dia nolokoin-tanana avokoa:
Nameno ny araben'i Dhaka ny Mangal Shovajatra:
Ankalazain'ireo fiarahamonina Bangladeshita mpila ravinahitra ao amin'ny firenena maro manerantany ny Mangal Shovajatra. Ity ny fankalazana iray tao Aostralia Andrefana :
Sary nalefan'ny OMI (@multiculturalwa) tamin'ny 21 Aprily 2016 tamin'ny 8:42 hariva PDT
Samy mandray anjara amin'ny fetibe ny rehetra:
Sary nalefan'ny MOMBA AN I BANGLADESH. (@instabangla71) tamin'ny 15 Aprily 2016 tamin'ny 8:09 maraina PDT